Ị nwere ike igosi m ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta redlinks ọhụrụ maka SEO?
Ọ dịghị mkpa ịsị na ụlọ njikọ dị na nso nso a dị ọbụna mkpa karịa na Nchọpụta Nyocha Search (SEO) karịa mgbe ọ bụla. Ọ bụ ya mere ị ga - eji nweta azụmazụ ọhụrụ - nke na - ahụkarị ma ọ bụ nke a - bụ MUST maka onye ọ bụla webmaster na onye nwe ụlọ ebe ọ chọrọ ka inwe ọganihu dị ukwuu na SEO, na ọrụ ha n'ịntanetị hụrụ n'etiti nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu. Ka anyị chee ihu - inweta ntanetịzụ ọhụrụ nke na-arụ ọrụ maka ịkwalite nkwado n'ịntanetị abụghị naanị banyere ntụkwasị obi ha ma ọ bụ nkwenye ha. Echere m na ụlọ njikọ ejikọta na-ebute na ị na-ebute ezigbo uru gị na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog - n'ikpeazụ, ị na-ebute ndị nlekota niche ma mee ka onwe gị rụọ ọrụ nke ọma ịkọrọ, ịkọ na njikọta. Ya mere, ọ dịghị mkpa ọ dị mkpa iji ọsọ ọsọ na-agbalị iji jide ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ nke backlinks ọhụrụ. Ọ ga-aka mma ịkwado ihe dị mma na àgwà ha - nke mbụ. Ime otú ahụ, ka m gosi gị ụfọdụ iji mee ihe iji gosi na ị ga - achọpụta akwụkwọ ọhụrụ ndị kachasị mma - ya na ọdịnaya gị.
Ọdịnaya Pụrụ Iche nke Na-enye Ọganihu Dị Ukwuu
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog ọ bụla nwere ike inwe ọdịnaya dị ike nke na-enye ndị nwere mmasị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nyocha nke ndị ahịa nwere ike ịtụ anya ka ha ghọọ ezigbo ndị ahịa. N'ụzọ dị otú a, karịsịa web pages gị nwere ike ịmatakwu na Google dị ka ihe kachasị mma maka mgbasa ozi n'ịntanetị karịa, ọ bụla weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị metụtara njikọ isiokwu ahụ ma ọ bụ otu ụlọ ọrụ azụmahịa. Kedu ihe ọzọ - ịnweta ọhụrụ backlinks nwere ihe dị iche iche ma dị elu nke pụtara na ị ga-erite uru site na njikọ njikọta, nke a makwaara dịka ndị kachasị ike na White-Hat SEO.
Njikarịcha Ọdịnaya na Ngosipụta
Tụlee ịmeghari akụkụ nke odide ederede gị (ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ndị kasị njọ) n'ime ụfọdụ nke kachasị mma na nke kachasị mma iji hụ ọdịnaya. M na-ekwu ebe a na a na-atụ aro ka ị tinye oge gị n'ịmepụta ụdị nke ọdịnaya kachasị elu nke a pụrụ ịtụ anya na ọ ga-eme ka ị nweta okporo ụzọ weebụ dị ukwuu, na-adọta ọtụtụ azụndọtị n'otu oge ahụ - fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ nke onwe gị. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-adịrị mma ilekwasị anya n'ịmepụta ihe ngosi nke ihe ngosi anya, ihe ntanetị, ndị na-ese foto na ọnụ ahịa bara uru nke ga-anọgide na-ewuru gị backlinks site na atụmanya oge etiti.
Nchịkọta ndị ọbịa na-ewuli gị ikike
Ịgakwuru ndị na-ede blọgụ na-ewu ewu na nchịkọta gị ma ọ bụ top-influencers dị mkpa maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị ka bụ ụzọ dị ukwuu ọ bụghị naanị iji nweta akwụkwọ ọhụrụ backlinks dị na peeji nke dị ike PageRank, mana iji wuo ikike nke onwe gị na ntụkwasị obi n'etiti ndị ọrụ. N'ikpeazụ - ịghọ isi iyi nke ọkachamara ọkachamara n'ọhịa, ya mere na-ebute ụzọ ma na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog guzoro na nchịkọta ọchụchọ. N'otu oge ahụ, echefula na n'oge ọ bụla ị na - enye ndị ọbịa ibe gị ozi ọma - ị na - enwetaghachi azụlinks iji duzie ndị ọbịa na - eguzosi ike n'ihe na ibe gị Source . Naanị jide n'aka na ị na-ede akwụkwọ ndị ọbịa na-achọpụta na-achọpụta ihe ndị dị mkpa ma na-eme ka ịdee akwụkwọ ozi dị mma maka nzube ziri ezi - na ịmeela!